Kedu Ikike TV nke Apple na Ị Chọrọ?
Ngwa & ngwa IOS naanị
Kedu Ikike TV nke Apple Ị Dị Mkpa?
Ikike 32GB ma ọ bụ 64GB dị gị mkpa?
Apple TV dị na 32GB na 64GB ike, ya mere nke nlereanya kwesịrị ị na-eji?
A na-emepụta TV Apple dị ka ebe ọhụụ maka ọdịnaya mgbasa ozi. Nke a pụtara na egwu, ihe nkiri, ihe ngosi TV, na ọdịnaya ndị ọzọ multimedia nke ị na-enweta na sistemụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-edegharị ya mgbe ọ bụla ị chọrọ, kama ịchekwa ya na Apple TV n'onwe ya.
Nke a abụghị ọchịchị siri ike na ngwa ngwa - ka ị na-anakọta egwuregwu, ngwa ngwa, ma na-ekiri ihe nkiri, nchekwa na ngwaọrụ gị ga-eji ya. (Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, nke a bụ nanị nwa oge).
N'iburu nke a n'uche, ebe ọ bụ na ihe dị iche iche $ 50 dị n'etiti ụdị abụọ a ga-abụ ihe a tụlere, ịghọta otú Apple TV si eji nchekwa, echekwa ọdịnaya, na ijikwa bandwidth kwesịrị inye aka kọwaa mkpebi gị nke gbara ihe atụ ịzụta.
Otú TV Apple si eji Nchekwa
Ihe Apple TV na-eji nchekwa maka software na ọdịnaya ọ na-agba, ihe ọ bụla n'ime puku puku 2,000+ na ọtụtụ puku fim ndị dị ugbu a na Store Store na site na iTunes (na ụfọdụ ngwa).
Iji nyere aka belata ọnụ ọgụgụ ohere, Apple emepụtala ụfọdụ nkà na ụzụ na-eji ngwa ngwa "na-achọ" na-eji ngwa ngwa na-ebudata ọdịnaya ị chọrọ ozugbo ka ị na-ekpochapụ ọdịnaya ị na-adịghị mkpa ọzọ.
Nke a na-enye aka ngwa ngwa iji nye ọnọdụ dị elu na mmetụta n'oge egwu, dịka ọmụmaatụ - naanị ngwaọrụ na-ebudata ọkwa ole na ole mbụ nke egwuregwu ahụ mgbe mbụ ebudatara ya.
Ngwa niile ejighi aka: Ụfọdụ na-ebikarị ohere karịa ndị ọzọ, egwuregwu na-abụkarị oghere oghere. Ọ bụrụ na ị nwererịrị Apple TV ị nwere ike ịlele otú echekwalarị nchekwa na Ntọala> Ozuruọnụ> Ijiji> Jikwaa Nchekwa , ebe ị nwere ike ihichapụ ngwa ị na-adịkwaghị mkpa iji chebe ohere. (Dị nnọọ pịa eriri ahihia n'akụkụ aha ngwa).
Apple TV na-enyekwa gị ohere ịnweta foto gị na ịnakọta egwu site na iCloud. Ọzọkwa, Apple echewo na nke a na ntinye ngwọta ya na-ezo naanị ihe kachasị ọhụrụ gị ma na-enwetakarị ọdịnaya na Apple TV. Okenye, na-ejikarị eme ihe eji eme ihe ga-agafe na ngwaọrụ gị na-achọ.
Ụzọ kachasị mfe ị ga-esi ghọta nke a bụ na ka ebudatara ọdịnaya ọhụrụ gị na Apple TV, ọdịnaya ndị ochie ka dị.
Otu ihe dị mkpa ị ga-eche bụ na ka Apple na-ewepụta ọdịnaya 4K, yana dịka ihe egwuregwu nke egwuregwu na ngwa ndị ọzọ dị na usoro ahụ dịkwuo ibu, ọnụ ọgụgụ nchekwa dị na ya nwere ike ịghọ ihe dị mkpa karị.
N'oge na-adịbeghị anya, Apple mụbara ngwa ngwa ndị dị na Apple TV ruo 4GB site na 200MB. Nke ahụ dị mma maka egwuregwu dị ka ọ pụtara na ọ gaghị adị gị mkpa ịnweta ọtụtụ ihe ndị dị na ntanetị (na-enyere ndị mmepe aka ịmepụta ebe ndị ọzọ na-ese onyinyo) mana ha ga-eri ohere na ụdị slimmer.
Olee otú Bandwit na-arụ na TV Apple
Ọ bụrụ na ị gụọ nke a, ị ga-ahụrịrị na arụmọrụ dị mma mgbe ị na-eji Apple TV dabere kpamkpam na bandwidth ọma. Nke ahụ bụ n'ihi na ọbụna mgbe ị na-ekiri ihe nkiri (ma ọ bụ iji ngwa ndị ọzọ), usoro ahụ ga-agbanye ụfọdụ n'ime ọdịnaya mgbe ị na-ekiri.
Ọ dị mma iji ntanetị na-asọ asọ iji kpochapụ ugbua eji ọdịnaya mee ụzọ maka ọdịnaya ị chọrọ ugbu a, ma ọ daa ma ọ bụrụ na ị nwere bandwidth mara mma.
Otu ụzọ gburugburu nke a bụ iji ụdị 64GB ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ na bandwidth, dịka a ga-echekwa ọdịnaya gị na igbe gị, belata ụdọ ị nwere ike ịnweta ka enwere ọdịnaya ọhụrụ. Ọ bụrụ na i nwere ezigbo bandwit mgbe ahụ, nsogbu ahụ na obere ihe ikike dị ala ga-anapụta ihe ị chọrọ.
Ihe anyị na-amaghị bụ otú Apple si eme atụmatụ ịmepụta Apple TV n'ọdịnihu nakwa otú nchekwa dị mkpa dị ka ọ na-eme mgbanwe ọ bụla n'ọdịnihu. Dịka e kwuru n'elu, ụlọ ọrụ ahụ na January 2017 mere ka ọtụtụ ngwa ọ na-enye ndị mmepe aka maka usoro ahụ.
Anyị anụwo na Apple na-atụ anya ịmalite ọrụ ọrụ ndenye TV. Ụlọ ọrụ ahụ agbanwegharịkwala Apple TV n'ime ụlọ ỤlọKit, na n'ọdịnihu enwere ike ịme Siri ka ọ bụrụ onye inyeaka n'ụlọ. Ihe ndị a ga-eme ka ihe ndị ọzọ dị mkpa na nchekwa ahụ n'ime igbe Apple TV gị.
Ndụmọdụ maka ndị na-azụ ahịa
Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ole na ole, kpọọ egwuregwu ole na ole, ma na-ekiri ihe nkiri n'eleghị anya na Apple TV mgbe ahụ, 32GB Apple TV nwere ike idozi gị. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ nso-ozugbo ịnweta egwu gị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ihe oyiyi, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ikike dị ukwuu, nke kwesịkwara ịnye nsonaazụ kachasị mma ma ọ bụrụ na i nwere nrụgide bandwidth.
Ọ bụrụ na ị na-atụ anya igwu egwuregwu dị ukwuu ma na-eji ihe ndị ọzọ bara uru, dị ka akụkọ ozi na ihe omume dị ugbu a, ọ na-eme ka ụfọdụ chee na ị ga-etinye ego iri ise na 64GB. N'otu ụzọ ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọrụ kachasị mma site na nhọrọ ị ga-ahọrọ ụdị ikike dị ukwuu ga-emepụta nke a karịsịa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, mkpebi nke nha ịzụta ga-abata otú ị na-ezube isi mee ihe ngwọta nke mmiri Apple .Ma, Apple nwere ike ịnye ọrụ ndị ọhụrụ ma dị mma n'ọdịnihu nke nwere ike ịchọrọ ngwaọrụ dị elu.
Na-atụ egwu M: Minion Rush Atụmatụ
The Top iPad ngwa ọdịnala maka njem n'ebe ọ bụla
Apple Watch na - eme ka ndị ọrụ dị ike
10 Egwuregwu Akụrụngwa kachasị mma maka iPhone na iPad
Enwere Ike Inye Onyinye Egwu dika Onyinye?
Esi lelee Amazon Prime Video na Apple TV
Egwuregwu iPhone 6 maka Oge Njegharị PGA
Ịghọta Microsoft Powerpoint na otu esi eji ya
Otu esi enwetaghachi ICloud Echefuru ederede Paswọdu
Ebumnuche iji meziwanye ụlọ ọrụ Kọmputa gị
Ihe ị ga-eme Mgbe Windows Media Player agaghị ọkụ CD
Esi kwalite Gmail Mgbakwunye na-enweghị ahapụ ozi ahụ
Xbox One X vs Xbox One S: Gini bu Nkewa?
Mpaghara nke Onyunyo Na-eme Ka Anyị Bịa na Telltale Version of Batman
Otu esi ejide ma chekwaa Data Game na Corona SDK
Ụzọ ise foto foto gị nwere ike ịnwụ na Intanet
Ị Kwesịrị Ịzụta Nintendo 3DS ma ọ bụ Nintendo 2DS?
Kedu ihe bụ Xbox 360 Core System?
Ijikwa Yahoo Yahoo Ndi ana-akpọ
5 Iwu maka Nyocha Ịgba Ọsọ Ziri Ezi Ngwa
Egwuregwu 100 Xbox 360 kacha elu
DSN: Nkwupụta Ọnọdụ Nhazi maka SMTP Email
Ihe nchịkọta ihe nchịkwa dị na Bochum nke mba ọzọ?
Esi melite Apple TV Gị iPhone
ProductKey v1.92 Nyochaa Ngwa Nchọpụta Ihe Ngwaahịa Na-enweghị Atụ
Otu esi akọ akụkọ ọjọọ Safari na Apple
Ngwunye Amplifier Ngwunye Ngwunye nke Na-akwado Ọkpụkpụ